इन्द्रेणी धन रीलों गोल्ड को इन्द्रेणी धन रीलों गोल्ड को
Barcrest इन्द्रेणी धन स्लट को श्रृंखला मा नवीनतम जारी गरेको छ, इन्द्रेणी धन: सुन स्लट को रील. यो खेल अघिल्लो झैं एक आइरिस विषय छ र पनि अधिक बोनस सुविधाहरू छ. पछि यो कुनै जम्मा आवश्यक इन्द्रेणी धन खेल हो तपाईं निक्षेप रकम बारे चिन्ता बिना स्वतन्त्रता यो खेल्न सक्छन्. यो स्लट एक को दावा 100 बोनस सुविधाहरू एक विस्तृत एरे खेलाडी उत्साहित राख्न बाध्य छन् भन्ने साथ paylines.
Barcrest वैज्ञानिक खेल निगम को एक भाग हो भनेर एक स्लट खेल डेभलपर. यो हाल बारेमा संचालित 20,000 बेलायत मा स्लट मिसिन
यो कुनै जम्मा आवश्यक इन्द्रेणी धन खेल छ5रील र 100 paylines. खेल प्रति स्पिन धेरै 100 £ रूपमा प्रति स्पिन 50p रूपमा कम देखि नाटक छ. यो RTP दर देखि भिन्न 94% र 98%. खेल एक शानदार एक तपाईं एक कम बजेट केही ठूलो आनन्द लागि देख रहे भने खेल्न छ.
खेल धेरै राम्रो प्रतीक ज्यादातर विषय सम्बन्धित हुनुको साथ डिजाइन गरिएको छ. तपाईं leprechauns छ, घोडाको टाप, toadstools, rainbows आदि. र त्यहाँ यस्तो हृदय रूपमा सामान्य कार्ड खेल प्रतीक हो, हीरे आदि जो अलग रंग मा आउन. यो THEMED प्रतीक कार्ड प्रतीक भन्दा एक उच्च मूल्य छ.
यो स्लट सुविधाहरू धनी छ. तपाईं बोनस तीन विभिन्न प्रकार जंगली प्रतीक अलग्गै विशेषताहरु छ. पहिलो, त्यहाँ निःशुल्क spins दौर बेलुन स्क्याटर द्वारा रूपबाट जो. यहाँ तपाईँले एक चार लुकेका विकल्प छनोट गर्न एक विकल्प प्राप्त. तपाईं प्राप्त मुक्त spins संख्या तपाईं छान्ने विकल्प निर्भर. यहाँ तपाईँले सम्म प्राप्त गर्न सक्छन् 100 मुक्त spins. साथै, यो हुनुको कुनै जम्मा आवश्यक इन्द्रेणी धन खेल तपाईं अन्त सक्छ यी निःशुल्क spins देखि ठूलो विजेता.
अर्को, त्यहाँ परी बोनस अनियमित रूपबाट जो. त्यहाँ बाहिर जो एक समयमा सम्मानित छ सात विभिन्न बोनस छन्. यो बोनस अतिरिक्त wilds समावेश हुन सक्छ, multipliers, मुक्त spins आदि.
र अन्तमा, त्यहाँ ठूलो शर्त विकल्प हरेक Barcrest खेल मा पूर्वनिर्धारित बोनस राउन्ड छ जो. तपाईं सम्मानित छन्5यस्तो अधिक wilds रूपमा अतिरिक्त सुविधाहरू लिङ्क spins, थप THEMED प्रतीक आदि.
यी सबै यो कुनै जम्मा आवश्यक इन्द्रेणी धन खेल तपाईँले खेल धनी तपाईं यसलाई प्ले सुरु जब तपाईं पहिलो थिए भन्दा छोड्न मदत गर्न सक्छ छ भन्ने तथ्यलाई संयुक्त.
इन्द्रेणी धन: सुन को रील Barcrest देखि इन्द्रेणी श्रृंखला मा अझै सबै भन्दा राम्रो छ. यो तपाईं थप फिर्ता आउने राख्छ कि एक मनोरंजक स्लट बनाउन अधिकार रकम सबै सामाग्री छ. तपाईं यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ अर्को कारण एक कुनै जम्मा आवश्यक इन्द्रेणी धन खेल हो. त्यसैले अनलाइन प्राप्त र यो एक स्पिन दिन.